အာရှနိုင်ငံများ | ခရီးသွားသတင်း
ကမ္ဘာကြီးသည်ကြီးမားပြီးခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်နေစဉ်နေရာတိုင်း၌သက်သောင့်သက်သာခရီးသွားနိုင်ရန်အတွက်အချိန်နှင့်ငွေများလိုချင်သည်တကား! ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်မြေပုံကိုကြည့်ရမယ်၊ မင်းဘယ်လိုထင်လဲ အာရှတိုက်?
အာရှမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုတစ်ခုတည်းသောခရီးစဉ်တစ်ခုမှာဖုံးလွှမ်းရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည် ဒေသအလွန်ကြီးမားသည် နှင့်တရုတ်ကဲ့သို့သောသူတို့ကိုယ်သူတို့မှကမ္ဘာကြီးဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံများရှိပါတယ်။ ဒီတော့အာရှကိုသွားဖို့စဉ်းစားတာကယနေ့ငါပြောနေတာကိုတွေ့ရတယ် အာရှပစိဖိတ်သို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံများ
အာရှသည်ကျယ်ပြန့်ပြီးမတူကွဲပြားသည်။ ကမ်းခြေကိုနှစ်သက်သော၊ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်းနှင့်အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်းတို့သည်ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ အိန္ဒိယတို့ကဲ့သို့အရှေ့တောင်အာရှကိုရွေးချယ်သည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုမိုကောင်းမွန်ရန်ပိုလိုလားသူများသည်ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံများသို့သံလိုက်အိမ်မြှောင်ကိုသွားကြသည်။ အမည်တစ်ခုစီတွင်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု၊
ကျနော်တို့အာရှပစိဖိတ်ကိုခေါ် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့မဟုတ်အနီးရှိကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်အရှေ့တောင်အာရှ၊ Oceania နှင့် Central Asia များစွာပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ သို့သော်ခရီးသွားသည့်အခါအရွယ်အစားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရမည်။
ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာအရှေ့တောင်အာရှကိုစွန့်ခွာသွားမှာပါ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းကိုအာရုံစိုက်ပါ.
ကမ္ဘာပေါ်မှာကျွန်တော့်နေရာက ကျွန်းများနှင့်တောင်များနိုင်ငံကြီးမားသောမြို့ပြပြင်းအားများနှင့်နေရာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ၎င်းတွင်နေထိုင်သည် လူ ဦး ရေသန်း ၄၀၀ ကျော် နှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏ပြာမှစီးပွားရေးအင်အားကြီးအဖြစ်ပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ ၁၅ နှစ်ကြာသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာခဲ့သည် အကယ်၍ ဒီရောဂါဟာဒီနှစ်အိုလံပစ်နှင့်အတူမဟုတ်ခဲ့လျှင်, မှတ်တမ်းများကိုချိုးဖောက်လိမ့်မယ်။
ခရီးသွားအများစုသည်တိုကျိုနှင့်ကျိုတိုသို့သွားကြစဉ်တခါတရံအိုဆာကာတွင် ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ဤမြို့များနှင့်မြောက်ပိုင်းရှိ Sapporo ဖြစ်နိုင်သော Nara, Hiroshimao Nagasaki, သင့်တွင်ရှိသင့်သည်။ သို့သော်သင်၌အချိန်၊ မြေပုံကိုဖွင့်ပြီးလမ်းညွှန်အသစ်များကိုရှာဖွေပါ.
နွေရာသီမှာဂျပန်ကိုသွားဖို့အကြံမပေးပါဘူး။ ငါ 2019 ခုနှစ်တွင်သွား။ အပူနှင့်စိုထိုင်းဆကြီးမားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သင်ချွေးမချိုးဘဲမလှုပ်ရှားနိုင်ပါ။ ငါကာရစ်ဘီယံပျော်မွေ့ရန်အိုကီနာဝါနှင့်မီယာကိုဂျီမာသို့သွားသော်လည်းပင်လယ်ရှိအပူချိန်သည်မခံမရပ်နိုင်လောက်သောကျွန်းများပေါ်တွင်ပင်။ တိုကျိုကိုဖော်ပြရန်မ။ မင်းလမ်းမလျှောက်ချင်ဘူး၊ အပူကမင်းကိုကုန်သွားစေတယ်။
အခုတော့နွေရာသီတစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် မြောက်ဘက်ကိုသိဖို့သွားဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်း၊ Hakodate, Sapporo, ကဲ့သို့သောနေရာများ။ သင်သည်ထူးဆန်းသော ၃၀ ဒီဂရီမှလွတ်မြောက်ပြီးလှပသောအိုင်ရှုခင်းများကိုပျော်ရွှင်စွာခံစားကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဆောင်းရာသီ၏အအေးသည်သင်တို့ကိုမခြောက်လှန့်ပါက၎င်းသည်ဆီးနှင်းနှင်းခဲများ၏အလွန်ဂန္ထဝင်နေရာများဖြစ်သည်။
Tokio ၎င်းသည်လှပသောမြို့တော်ကြီးဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်လမ်းတွင်ပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်း၊ အသံတိတ်၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ ရပ်ကွက်များအကြားပြproblemနာမရှိလမ်းလျှောက်နိုင်သောကြောင့် Shibuya သို့မဟုတ် Shinjuku ဒေသတွင်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ပျောက်ဆုံးသွားမှာကိုကြောက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ တိုကျိုကိုလှည့်ပတ်လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ဂျပန်မီးရထားလမ်း ဒီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ကသင့်ကိုရထားနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတယ်၊ အမှန်တရားကတော့မြေအောက်ရထားဟာတစ်ခါတစ်ရံမှာပိုမြန်ပြီးမြေအောက်မြင်ကွင်းတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်။
ကျိုတို ၎င်းသည်တည်ငြိမ်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောမြို့ဖြစ်ပြီးဘုရားကျောင်းများပြည့်နှက်နေသည်။ ပိတ်သည် နရာမိမိအသမင်နှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ် arashiyama ၎င်း၏ဝါးသစ်တောနှင့်အတူ။ သင်ကျည်ဆံရထားပေါ်တွင်နောက်ထပ်နာရီအနည်းငယ်ဆက်လုပ်ပါကသင်ရနိုင်သည် ဟီရိုရှီးမား ရန်၎င်း၏ပြတိုက်နှင့်နောက်ထပ် afield အတူ Nagasaki ။ နဂါး ၎င်းသည်တိုကျိုနှင့် ပို၍ နီးသည် အိုဆာကာ ဒါဟာမြို့တော်နှင့်အတူအရွယ်အစားနှင့်ညဥ့်ဘဝတိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်။ လူတွေကပိုကောင်းတယ်၊ သင်ပျော်စရာတွေအများကြီးရလိမ့်မယ်။
Kanazawa ၎င်းသည်ရွာ၏စည်းချက်နှင့်လှပသောဆာမူရိုင်းရပ်ကွက်များရှိသည်။ အင်နိုရှီမာ နွေ ဦး ရာသီ၌ပျော်မွေ့ရန်တိုကျို၏ဗဟိုနှင့်တစ်နာရီခန့်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ Takasaki ၎င်းသည် Kannon ရုပ်ထုနှင့်တိုင်းပြည်၏အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်မှုထုတ်လုပ်သည်။ Kawagoe လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာကတိုကျိုကဲ့သို့ဖြစ်သည် takao တောင် ရေကန်ကလှတယ် Kawaguchico သငျသညျဖီဂျီကိုကြည့် ... စာရင်းအပေါ်တတ်၏။ စိတ်ကူးကမြေပုံကိုဖွင့်ပြီးကျောပိုးအိတ်ဆွဲထားဖို့ပါ။
စျေးနှုန်းများ? အလယ်အလတ်နှင့်စျေးကြီးသော်လည်း၊ ယူရိုသို့မဟုတ်ဒေါ်လာဖြင့်ကိုင်တွယ်လျှင်သင်အံ့အားသင့်မည်မဟုတ်ပါ။ လက်တင်အမေရိကန်များအတွက်၎င်းသည်စျေးကြီးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အားသာချက်ကဒါပဲ သေးငယ်တယ် သူ့မှာကိုယ်ပိုင်ရှိပေမဲ့လည်းသင်ဟာဆိုးလ်နဲ့ဘူဆန်ကိုတစ်ခေါက်တည်းနဲ့သိကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဆိုးလ် ၎င်းသည်တိုကျိုကဲ့သို့ခေတ်မီသောမြို့ဖြစ်ပြီးအနည်းငယ်ဖုန်ထူပြီးဆင်းရဲသောရပ်ကွက်များလည်းရှိသည်။ နှစ်နိုင်ငံစလုံး၏သမိုင်းသည်အတူတူပင်မဟုတ်ပါ။ တောင်ကိုရီးယားသည်တိုးတက်များပြားလာသော်လည်းဂျပန်နိုင်ငံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စီးပွားရေးကွာဟချက်များပိုများသည်။
ဆိုးလ်မှာ ခေတ်သစ်မြို့ပြရှုခင်း မင်းစိတ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းမြင်ရင် k- ဒရာမာ သို့မဟုတ်သင်သူ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြဘူး K-Popတောင်မှကိုးရီးယားတောင်မှအသံထွက်ထုတ်လုပ်မှုကိုအိမ်ပြင်မှာရိုက်ကူးပြီးကတည်းကပိုကောင်းတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ခရီးသွားကြော်ငြာ၊ သင်ငါ့ကိုမေးရင် အစားအစာကကောင်းတယ်၊ လမ်းဘေးဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ပြတိုက်တွေလည်းရှိတယ်၊ နေဝင်ချိန်ရောက်တဲ့အခါသင့်ကိုအမြင့်အထိခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်။
သင်လည်းသွားနိုင်သည် စစ်မဲ့ဇုန်, ကိုရီးယားနှစ်ခုအကြားသေးငယ်တဲ့areaရိယာ။ စစ်ပွဲမပြီးဆုံးသေးဘူးဆိုတာကိုသတိရပါ။ တရားဝင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အမေရိကန်အရာရှိတွေနဲ့ကိုရီးယားတွေမနှစ်သက်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်တွေကဂျပန်လိုနည်းနည်းပဲကြိုက်တယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။
သင်လေယာဉ်စီး။ သွားနိုင်သည် Jeju ကျွန်း, နှစ်စဉ်အချိန်မရွေးလှပသောကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်များထပ်တိုးလျှင်ပင်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စျေးပေါတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေရှိတယ်။ အမှန်တရားကတော့ခရီးစဉ်ကိုမလွတ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ ထိုအခါသင်ယူနိုင်ပါတယ် ဘူဆန်သို့ကျည်ဆံရထား၊ ဒါကိုသိဖို့ရုပ်ရှင်ထဲမှာလိုဖုတ်ကောင်များရှိမှာမဟုတ်ဘူး ဆိပ်ကမ်းမြို့ အရာအားဖြင့်အိမ်နီးချင်းဂျပန်နှင့်နီးကပ်စွာအဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်။
အစိုးရသည် Busan ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီးထိုကြောင့်ကျင်းပသောပွဲတော်လည်းဖြစ်သည် Busan အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဒီမြှင့်တင်ရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။ ဥပမာဒီကနေဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဟီရိုရှီးမားကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
အစပိုင်းမှာငါတို့ပြောခဲ့တာကတရုတ်ဟာသူ့ဟာသူကမ္ဘာကြီးဖြစ်တယ်၊ အာရှပစိဖိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဒေသခွဲကိုအနည်းငယ်သွားဖို့စီစဉ်တဲ့အခါမှာငါတို့ကဖြတ်တောက်ပြီး ရှန်ဟိုင်းနှင့်ဟောင်ကောင်။ ဤရွေ့ကားအထူးစီးပွားရေးဇုန်များဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များအတွင်းတရုတ်စီးပွားရေးအတွက်ကောင်းစွာစနစ်တကျလုပ်ဆောင်ခဲ့သော "စနစ်နှစ်ခု၊ တစ်နိုင်ငံ" ဟူသောအတွေးအခေါ်လွှမ်းမိုးသည်။
မြို့နှစ်မြို့ သူတို့ကနိုင်ငံခြားကိုလိုနီဖြစ်ရပြီ နှစ်ပေါင်းများစွာဒါဥရောပခြေရာကို၎င်း၏ဗိသုကာနှင့် gastronomy ၌တည်ရှိ၏။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာလှပပြီးသင်ကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ဟာဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့နီးစပ်တဲ့တရုတ်ကမ်းရိုးတန်းမှာပါ။
ရှန်ဟိုင်းသည် Yangtze မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင်ရှိသည်နိုင်ငံ၏အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ဟောင်ကောင်နှင့်ပေကျင်းအကြားအကြမ်းအားဖြင့်တူညီနေသည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်းငယ်အချို့လည်းပါဝင်သည် စိုစွတ်သောအပူပိုင်းရာသီဥတု အရာကနွေရာသီမှာနည်းနည်းတွန်းလှန်စေသည်။ အများကြီးကဒီကတည်းကကတည်းကနေထိုင်သူသန်းပေါင်းများစွာ၏လူများစဉ်းစား တရုတ်စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္centerာရေးစင်တာ နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အရေးအပါဆုံးတစ် ဦး ။
ခရီးသွားတစ် ဦး အနေနှင့်သင်ခရီးမသွားနိုင်ပါ Pudong ခရိုင်၎င်း၏မိုးမျှော်တိုက်နှင့်ရှန်ဟိုင်းမျှော်စင်နှင့်အတူအငြင်းပွားဖွယ်မရှိသောအိုင်ကွန်။ အပြင်ထွက်လို့မရဘူး Huangpu ခရိုင်ပို။ စီးပွားဖြစ်နှင့်လူနေအိမ်သို့မဟုတ်၏ Xuhui နှင့်၎င်း၏ပြတိုက်။ မြို့ဟောင်းသည်ကျော်ကြားလှ၏ Bundeli, မြစ်ကမ်းနားပေါ်မှာ။ ရည်ရွယ်သည် ကျောက်စိမ်းအဆိုပါ Yuyuan ဥယျာဉ်များ သူမအမြဲထ နန်ကျင်း Avenue
နောက်ဆုံးတော့ ဟောင်ကောင်။ ဒါဟာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ဟုဆိုသည် ရှန်ဟိုင်းထက်အရင်းရှင်ပို ဒီမိုကရေစီကိုပိုပြီးတောင်းဆိုဖို့အမြဲတမ်းလိုလိုဖြစ်နေတယ်။ ဟောင်ကောင်သည်ဟောင်ကောင်ကျွန်း (New Territories and Kowloon) နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ဒါ့အပြင်ရှိပါတယ် စိုစွတ်သောအပူပိုင်းရာသီဥတု ဒါဆိုမင်းနွေရာသီမှာမသွားဘူး travel ည့်သည်တွေအမြဲတမ်းရှိပါတယ် ဗစ်တိုးရီးယား Peak, Lantau ကျွန်း သို့မဟုတ် ကြယ်များ၏ရိပ်သာလမ်း, အစက်လှေကား။ သို့သော်ဤနေရာများထက် ကျော်လွန်၍၊ မြို့တော်ကိုယ်တိုင်ကအဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မိုးမျှော်တိုက်များ၊ လမ်းကျဉ်းများ၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးဈေးပေါသောစျေးကွက်များ၊ အစားအစာများဖြစ်သည်။
တစ်လခွဲကြာပြီးနောက်သင်သည်ဂျပန်အချို့၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအချို့သို့ခရီးထွက်သည်။ ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးအချို့ကိုချ အာရှနိုင်ငံများ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကြည့်ဖို့ဘာလဲ » အာရှနိုင်ငံအများ